Meksika: Fankalazàna ny Mofomamin’ireo Mpanjaka telo · Global Voices teny Malagasy
Meksika: Fankalazàna ny Mofomamin'ireo Mpanjaka telo
Voadika ny 07 Janoary 2011 16:42 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, 한국어, македонски, اردو, Italiano, 日本語, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, English
Fomban-drazana mahazatra amin'ireo Meksikana ny miaraka amin'ny fianakaviany ny 6 Janoary ary mihinana mofo mamy manokana antsoina hoe “Rosca de Reyes” (midika hoe “Mofomamin'ny Mpanjaka”). Izay olona mahita saribakoly plastika kely anatin'ny anjarana mofomaminy dia tsy maintsy mividy sakafo Meksikana ho an'ny rehetra ny 2 Febroary. Maro ireo mpitoraka blaogy nanoratra momba izany fomban-drazana izany, ny dikany sy ny fomba fankalazàna azy.
Milazalaza momba ny fomban'ny “Mofomamin'ny Mpanjaka” ny blaogy One Lucky Life:
Zavatra tadidiko hatramin'ny naha-tovovavy ahy ny fomban'ilay “mofomamin'ny mpanjaka” miaraka amin'ny fianakaviana. Natahotra aho, satria tiako ho hita tao amin'ny mofomamiko ny saribakoly plastika. Ho an'ireo izay mbola tsy mahafantatra tsara io fomban-drazana io, hazavaiko fohifohy:
Aty Meksika, isaky ny 6 Janoary, mivory ny fianakaviana ary manapaka ilay “Rosca de Reyes”(midika ara-bakiteny hoe Mofomamin'ny Mpanjaka) , izay mofomamy lehibe miendrika kodiarana voaravaka voankazo sy siramamy “cristallisé”. Ao anatin'io mofomamy io misy saribakoly kely plastika mampiseho an'i Jesoa. Samy mahazo tapaka mofomamy daholo ny tsirairay amin'ny mpianakavy, ary raha ao anatin'ny anjaranao no misy ilay saribakoly, dia tsy maintsy hasainao hihinana tamales ny fianakavianao amin'ny 2 Febroary!
Mike Gonzales, ao amin'ny blaogy New Santa Ana, dia manazava amin'ireo mpamaky ny antony isian'ny saribakoly kely mampiseho an'i Jesoa ao anatin'ny mofomamy:
Efa antitra ny fomban-drazana mametraka ny saribakoly kely (mampiseho an'i Jesoa zaza) ao anatin'ny mofomamy. Ilay Jesoa zaza, raha mbola miafina ao anatin'ny mofomamy, dia mampiseho ny làlan'i Jesoa, nitsoaka ny teti-dratsin'i Heroda izay nikasa ny hamono ny zaza rehetra ahiahiana ho ilay Mesia. Mahazo fitahiana izay mahita ny saribakolin'i Jesoa ary tsy maintsy mitondra izany any amin'ny fiangonana akaiky indrindra amin'ny 2 Febroary, Andron'ny “Chandeleur” (Día de la Candelaria). Amin'ny kolotsaina Meksikana, tokony mikarakara fety koa iny olona iny ary manome “tamale” (koba, solovolo) sy “atole” (zava-pisotro meksikana) ho an'ireo vahiny.
Ao amin'ny bilaogy Nibbles and Feasts, manazava i Ericka mpitoraka blaogy ny hoe nahoana no tsy maintsy mividy sakafo Meksikana ho an'ny hafa ny olona nahazo ilay saribakoly kely amin'ny 2 Febroary:
Araka ny fomban-drazana, tsy maintsy mikarakara fety ny olona nahita ny saribakoly kely tao anatin'ny tapaka mofomaminy ny 2 Febroary, Andron'ny “Chandeleur” na Dia de la Candelaria, ary mandroso tamales, sokolà mafana ary atole ho an'ireo vahininy. Chandeleur no andro nitondràn'i Maria an'i Jesoa zaza tany an-tempoly ary, ara-pomba dia io no andro ahazoan'ny labozia fitahiana any amin'ny Fiangonana Katolika.
"Rosca de Reyes" mampiavaka an'i Meksika, sary an'i A30_Tsitika, mpampiasa Flickr ary ampiasaina eo ambany fiarovana Creative Commons Attribution-Share Alike license
Hita ao amin'ny Nibbles and Feasts ny fomba fanamboarana ny Mofomamin'ny Mpanjaka.
Farany, tamin'ny 2008, ny mpitoraka bilaogy Amerikana Joy dia nanoratra momba ny fomban-drazana “Mofomamin'ny Mpanjaka” avy amin'ny fomba fijerina teratany vahiny:
OK, tsy dia hafahafa loatra ny mofomamy Rosca de Reyes amiko, fa vaovao amiko fotsiny. Fotoam-piravoravoana ity herinandro ity ho an'i Meksiko (mpamaky efa zatra: mahafantatra ianao izao fa fotoam-piravoravoana foana any, sa tsy izany?) satria ny 6 Janoray no Andron'ny Mpanjaka (Dia de Reyes), fantatra koa hoe Epifania. Efa fomba ny fahazoan'ny ankizy fanomezana. Fomba iray ankalazàna ity andro ity koa ny fandrosoana Rosca de Reyes. (Mandroso “mega-rosca” koa ny renivohitr'i Meksika ary manao matso.)
Mitovy tsiro sy endrika amin'ny Mofomamin'ny Mpanjaka, fihinana amin'ny Mardi Gras io mofomamy io — misy Jesoa kely mihitsy aza ao anatiny. (Fanamarihana: Izaho no nahazo ny Jesoa voalohany, izay midika fa tokony hanasa an'i Brenda any an-tranoko aho rehefa afaka kelikely amin'ity volana ity ary handroso tamales. Nefa raha ny hita dia misy Jesoa maro ao anatin'ny mofomamy iray.)